कात्तिक ४ गतेबाट सामलिङ पावर कम्पनीको आइपिओ, कतिजनाले पाउलान् १० कित्ता ? | Seto Khabar
कात्तिक ४ गतेबाट सामलिङ पावर कम्पनीको आइपिओ, कतिजनाले पाउलान् १० कित्ता ?
काठमाडौं– सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले आगामी कात्तिक ४ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सात लाख ३० हजार कित्ता सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) गर्न लागेको हो ।
निष्कासन गरिने साधारण सेयरमध्ये पाँच प्रतिशत (३६ हजार ५०० कित्ता) सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँट गरेको र दुई प्रतिशत (१४ हजार ६०० कित्ता) कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी ६ लाख ७८ हजार ९०० कित्ता खरिदका लागि सर्वसाधारणले आगामी कात्तिक ४ गतेदेखि आवेदन दिन पाउने छन् ।
कम्पनीको विवरण पत्र अनुसार सर्वसाधारणले कात्तिक ८ सम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सो अवधिसम्म माग गरिएबमोजिम आवेदन नआए कात्तिक १८ सम्म निष्कासन खुला हुने विवरणपत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका र माइजोगमाई गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने माई खोलामा ९.५१ मेगावाट क्षमताको माइबेनी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माणको कूल अनुमानित लागत दुई अर्ब हुने र प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड तीन लाख पाँच हजार हुने जनाएको छ ।
सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सिआस्बा सुविधा प्रदान गर्न अनुमति पाएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै अनलाइनमार्फत ‘मेरोसेयर’ प्रयोग गरेर पनि आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार रेटिङ गर्दा इक्रा नेपालले यसलाई ‘केयरएनपी आइआर बिबी माइनस’ ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ । रेटिङअनुसार कम्पनीको हालको अवस्था दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिममा रहेको भन्ने बुझिन्छ ।